မင်းအတွက်ပါ – Grab Love Story
သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ကို စွဲလမ်းနေရသည့် အချက်တွင် စောက်ဖုတ်ယက် ကျွမ်းကျင်မှုလဲ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သန့်ဇင်မပေးသော စောက်ဖုတ်ယက်ပေးချင်းကို သန်းဇော်က ကောင်းကောင်း အသုံးချကာ သက်နွယ်၏ ကာမခလုပ်ကို ဖွင့်တော့သည်။ သက်နွယ်ကတော့ အိပ့်ယာခင်းမျာကို စုပ်ကိုင်ရင် သန်းဇော်အား ကော့ကောပေးနေသည်။ သန်းဇော်ကလဲ သက်နွယ်ခါးကို ကိုင်ကာ စောက်စီလေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ကလော်ကာ ယက်ပေးနေသည်။
အား…………. ဟင်း…………. အား…………… ဟင်း………….
ပြွတ်……….. ပြွတ်…………. ပြွတ်………… ပြွတ်………..
သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကြွက်နားရွက် ကလေးများပင် သိပ့်မဖြစ်သေးဘဲ ဖောင်းကြွကာ သန်းဇော်ကို ဆွဲဆောင်နေသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား အားနှင့် စုပ်ကာ စုပ်ကာ ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်က ဒီတစ်ခါတွင်တော့ တွန့်တွန့် လူးကာ အော်ညည်းလိုက်ရတော့သည်။ ထိုနောက်မှ သန်းဇော်က
“ထ သက်နွယ် ငါတို့ အပြင်သွားရအောင်”
သက်နွယ်မှာ မျက်နာလေးကိုရဲကာ ကာမစိတ်များ တတ်နေသည်။ သက်နွယ်က လောက ကြီးကို ဂရုမစိုက်တော့်ဘဲ သန်းဇော်ခိုင်းသည့်အတိုင်း အဝတ်စားများလဲကာ သန်းဇော်နောက်ကို လိုက်သွားသည်။ သန်းဇော်က အနီးဆုံး ဟိုတယ်ကို မောင်းလိုက်သည်။
အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် သက်နွယ်ကို ကုတင်ပေါ်သို့ လက်ထောက်ခိုင်းပြီး ပင်တီလေးကို ဖင်လုံးပေါ်ရုံ ချွတ်ကာ နောက်မှခါးကို ကိုင်ကာ စောင့်လိုးလိုက်သည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များစိုနေသည်မို့ အသံစုံများက တန်းကာ ထွက်လာသည်။
ဗြွတ်………….. ဗြွတ်…………… ဗြွတ်………… ဗြွတ်………….
အား…………… အား…………… အား………….. အား…………
သန်းဇော်ရဲ့ အားနှင့်ဆောင့် သံများမှာလည်း တဖြောင်း ဖြောင်းနှင့် ပျံလွင်နေသည်။ သက်နွယ်ကတော့ အိပ့်ယာခင်းများကို စုပ်ကိုင်ကာ အော်ညည်းနေရသည်။ သန်းဇော်ရဲ့ ဆောင့်ချက်များကို မခံနိုင်ဘဲ သက်နွယ်မှာ ကုတင်ပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားသည်။ ထိုခါမှ သန်းဇော်က သက်နွယ်ပင်တီလေး တစ်ခုလုံးကို ချွတ်လိုက်သည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ပင်တီလေးကို ချွတ်ပြီး သက်နွယ်အိုးလေးကို ဖြဲကာ စောက်ဖုတ်လေးအား နောက်မှ ယက်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာလဲ ခါးလေးကို ကောက်ကာ သန်းဇော်ရဲ့ ပြုစုပေးမှုကို ခံစားနေသည်။
“အင်း……. အား……….. အား………… အင်း………..”
သက်နွယ်က ခေါင်းအုံးကို မျက်နာကပ်ကာ အော်ညည်းလျက်ရှိသည်။ ထိုနောက်မှ သန်းဇော်က သက်နွယ်ခါးအောက်ကို ခေါင်းအုံးခုကာ နောက်မှနေ၍ ဆက်ကာ လိုးပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာခေါင်းလေးမော့ကာ သွားပြီး နောက်သို့ တစ်ချက်လျည့် ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ခေါင်းအုံးကို လက်နှက်ဖြင့် ဖိချေကာ သန်းဇော်ရဲ့ ဆောင့်လိုးမှုကို အော်ညည်းရင်း ခံစားတော့သည်။ သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ ဆောင့်ချက်များ ပြင်ထန်းလွန်းသလောက် ကာမစိတ်များ ပိုပိုကာ တတ်လာသည်။
အား…………… အား…………….. အား…………….
သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ရဲ့ အိုးကြီးကို တစ်ဖြောင်းဖြောင်းမြည်အောင် ဆောင့်လိုးရင်း သက်နွယ်ဆံစလေးအောက်မှ ဂုတ်သားလေးကို စုပ်နမ်းလေးလိုက်သည်။ ထိုနေရာလေးမှာ သွေးခြေလေးများဥကာ ရဲတတ်သွားသွားသည်။
ဗြွတ်…………… ဗြွတ်………… ဗြွတ်……… ဗြွတ်…………..
သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များနှင့် ရွဲနစ်ကာ နေသည်။ သန်းဇော်ရဲ့လိုးချက်တိုင်းတွင်းလည် စောက်ဖုတ်နှင့် လီးဝင်သံများ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေသည်။ ထိုနောက် သန်းဇော်က ငါးချက်ခန့် အားပြင်းပြင်းနှင့် ဆောင့်ကာလိုးလိုက်ပြီး လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ထုပ်ကာသက်နွယ်ဘေးတွင် ပက်လက်လှန်ကာ အိပ့်လိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာတော့ ဆေးစွဲနေသောသူ တစ်ယောက်ပမာ ကာမကို ယစ်မှုးကာ သန်းဇော်ပေါ်သို့ ခွတတ်ပြီးအပေါ်မှနေ၍ ဆောင်ကြာလိုးတော့သည်။ ထိုခြေနေကို သာ သန့်ဇင်မြင်လျင် ယုံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ခုတော့ အရှက်အကြောက်ကြီးသော သက်နွယ်မဟုတ်တော့ပေ။ သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ် လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ကာ သက်နွယ်ရဲ့ တင်းရင်းနေသော နို့လေးများ တုန်ခါနေပုံကို အရသာခံကာ ကြည့်ပြီး အောက်မှနေပြီး ပင့်ကာပင်ကာ ဆောင့်လိုးပေးသည်။
ဖြောင်း……………. ဖြောင်း……………… ဖြောင်း…………….
သက်နွယ်မှာ သားအိမ်သို့ ဆောင့်မိနေသောကြောင့် ကြာကြာမဆောင့်နိုင်ဘဲ သန်းဇော်ပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားသည်။ ထိုခါမှ သန်းဇော်က သက်နွယ်အိုးနှစ်လုံးကို ကိုင်ကာအောက်မှ ပင့်ဆောင့်ကာလိုးတော့သည်။ သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရင်ဘက်ပေါ်တွင် မှောက်နေသည်မို့ ဆောင့်ချက်များကို ထိထိမိမိခံစားနေရသည်။
အား………… အား……………. အား…………….. အား………….
“သက်နွယ်…. ငါလိုးပေးတါ ကောင်းလား ကြိုက်လား”
“အင်း……… ဟင်း……….. အင်း………….”
“ငါနဲ့ နင့်ယောက်ျားနဲ့ ဘယ်သူက ပိုလိုးနိုင်လဲ”
“နင်က…… အား…….. အား……….. ပိုလိုးနိုင်တယ်”
“ဟား…….. ဟား…….. အ့တာမျိုးမှ ကြိုက်တာ”
ဖြောင်း……………. ဖြောင်း…………… ဖြောင်း…………….
သန်းဇော်က သက်နွယ်အိုးနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့် ဖျစ်ညှစ်ပြီး ရိုက်ကာ လိုးတော့သည်။ ထို့နောက်မှ သန်းဇော်က သက်နွယ်ကို လှိမ့်ချပြီး လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနှင့်ပင် သက်နွယ်နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းကာ ဆက်ကာလိုးလိုက်သည်။ သန်းဇော်လဲ သက်နွယ်ကို အားရပါးရလိုးပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲကို လရည်များပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။
သန်းဇော်လဲမောဟိုက်သွားပြီမို့ သက်နွယ်ပေါ်ကို လီးမချွတ်ပဲ မှောက်ကာ အိပ့်လိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာတော့ လှုပ်ပင်မလှုပ်နိုင်တော့ဘဲ မျက်လုံးကို မှိတ်ကာ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူးရင်း မှိန်းနေရတော့သည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်နှင့်လရည်များ ရောကာ စီးကျနေသည်။
ထိုနေ့က သက်နွယ်တစ်ယောက် သန်းဇော်နှင့်အတူ ကာမရေယဉ်ကျောကို ညနေအထိ အကြိမ်ကြိမ်မျောပါ စီးဆင်းခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သော် သန့်ဇင်မရိပ့်မိအောင် ရေချိုးကာ ပင်ပန်းသည်ဟုပြောပြီး စောစောအိပ့်ယာဝင်ကာ အိပ့်လိုက်တော့သည်။
သန့်ဇင်မှာတော့ သက်နွယ်လို အိနြေ္ဒရှင် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုပံစံသွင်းကာ လိုးလိုက်သည်ဆိုတာကို မှန်းဆရင်း ကာမစိတ်များတတ်ကာ ဂွင်ကိုသာထုပြီး အိပ့်လိုက်သည်။ နောရက်တွင်တော့ သန့်ဇင်ရုံးမှ အလုပ်ဖြင့် သုံးညအိပ့် ခရီးထွက်လိုက်ရသောကြောင့် သက်နွယ်အခြေနေကို သိခွင့်မရတော့ပေ။
အွင်း…………. အွင်း…………. အွင်……………. အွင်း…………….
သန့်ဇင်အိမ်ရှေ့နံရံကိုကပ်ပြီး မျက်လုံးကို မှိတ်ကာထားလိုက်သည်။ သန့်ဇင်တစ်ယောက် အလုပ်မပြီးသေးဘဲ သက်နွယ်အခြေမေကိုသိချင်သောကြောင့် အလုပ်မှ မရရအောင် ခွင့်ယူကာ ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခုတော့ အိမ်ထဲကို မဝင်ခင်ကြားနေရသောအသံမှာ သန့်ဇင်ရင်ကို အသက်ရှု၍ပင်မရအောင် ခုန်နေစေသော အသံဖြစ်နေသည်။
အသားချင်းရိုက်သံနှင့်အတူ သက်နွယ်ရဲ့ ညည်း သံလေးက အိမ်အပြင်ကိုပင် လွင့်ပျံနေသည်။ သက်နွယ်တစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အံကြိတ်ကာညည်းနေခြင်း ဖြစ်မည်ထင်သည်။
သန့်ဇင်လဲ ပြတင်းပေါက်မှဟနေသော လိုက်ကာဘေးမှ မြင်ရသော နေရာမှ ချောင်းကာ ကြည်ဘလိုက်သည်။ သန့်ဇင်တစ်ယောက် ဖင်ထိုင်ပင်လဲမကျအောင်ပင် ထိန်းလိုက်ရသည်။ သူ၏အိနြေ္ဒရှင်မလေး သက်နွယ်မှာဧည့်ခန်းထဲတွင် ကုန်းပေးထါးကာ သန်းဇော်ကနောက်မှနေ၍ ခါးကိုကိုင်ကာ လိုးနေသည်။ ထိုမှမကပဲ သက်နွယ်ရှေ့တွင်တော့ သန်းဇော်နှင့် အတူဖာချဖော်ချဖက် သိန်းမောင်က သက်နွယ်လီးစုပ်ပေးတါကို အရသာခံနေသည်။ ဒါကြောင့်မို့ သက်နွယ်အသံမှာ အပြည့်မထွက်ဘဲ လည်ချောင်းထဲမှ အသံဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ သိန်းမောင်လီးမှာ ကာမကိစ္စကို လိုက်စားသူပီပီ ထိပ်ဖြတ်ထားပြီး အကျောများထောင်ကာ မဲပြောင်နေသည်။ သက်နွယ်ကတော့ ထိုလီးကြီးကို လွတ်ထွက်မသွားအောင် ပင်လက်နှင့် ကိုင်ကာစုပ်လျက်ရှိသည်။ .
ပြွတ်…………… ပြွတ်………. …. ပြွတ်…………..
အွင်း……………. အွတ်…………… အွင်း…………..
ထိုနောက်တွင်တော့ သန်းဇော်နှင့် သိန်းမောင် နေရာလဲလိုက်ပြီး သိန်းမောင်က သက်နွယ်နောက်မှနေပြီး လိုးပြန်သည်။ သိန်းမောင်က သက်နွယ်ကို တစ်ချက်မှမညှာပဲ နောက်မှနေ၍ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ကိုင်ကာလိုးသည်။ သက်နွယ်မှာ သိန်းမောင်လီးက သားအိမ်ကို ဆောင့်သောကြောင့်ထင်သည် ဆောင်းကာ လိုးလိုက်တိုင်း ခါးကုန်းကုန်းကာသွားသည်။
သန်းဇော်ကလဲ သက်နွယ်ခေါင်းကို ကိုင်ကာလီး​တချောင်းလုံး သက်နွယ်ပါးစပ်ထဲတွင် ပျောက်သွားသည်ထိ ထိုးထည့်ကာ စုပ်ခိုင်းနေသည်။ သက်နွယ်မှာတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သန်းဇော်ခါးကိုသာ ကိုင်ထားနိုင်သည်။
ထိုမှပင်မကြာလိုက် သန်းဇော်နှင့် သိန်းမောင်က တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အချက်ပြလိုက်ပြီး သက်နွယ်ကို လိုးနေခြင်းအား ရပ်လိုက်ပြီး သန့်ဇင်နှင့် သက်နွယ်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်အိပ့်သော အခန်းထဲသို့​ သုံးယောက်သား ဝင်သွားကြသည်။
ထိုခါမှ သန့်ဇင်လဲ အိမ်ထဲသို့ ဝင်လိုက်ပြီး အိပ့်ခန်းနားသို့ ကပ်ကာ ပုန်းနေလိုက်သည်။ သန့်ဇင်အိပ့်ခန်းနားသို့ ရောက်ရောက်ချင်း သက်နွယ်အသံလေးကို တန်းကာ ကြားလိုက်ရသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ သက်နွယ်အသံမှာ အရင်ကထက်ပိုကျယ်နေပြီး လင်းမယားနှစ်ယောက်အိပ့်သော ခုတင်မှာလည်း အသံမျိုးစုံတွေပင် မြည်နေသည်။
ဖြန်း………… ဖြန်း………….. ဖြန်း…………….. ဖြန်း………….
အား…………… အား…………….. အား……………
အွင်း……………. အား……………… အွင်း…………..
သန့်ဇင်လဲ အိပ့်ခန်းထဲသို့ မကြည့်သေးဘဲ အသံနှင့်ပင် ကာမစိတ်များ အဆမတန် တတ်ကာနေသောကြောင့် ဘောင်းဘီးကို ချွတ်ကာ လီးကို ထုပ်ပြီး ဂွင်းတိုက်လိုက်သည်။ ထိုနောက်မှ အိပ့်ခန်းထဲကို ကြည့်လိုက်ချိန်တွင်တော့ သက်နွယ်က သန်းဇော်အပေါ်ကနေပြီး ဆောင့်ပေးနေသည်။ သိန်းမောင်ကတော့ သက်နွယ်နောက်မှနေပြီး သက်နွယ်ကို လိုးနေသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်သည်နှင့် သန့်ဇင်တန်းကာသိလိုက်သည်မှာ သက်နွယ်ဖင်ပါခံနေပြီ ဆိုတာဖြစ်သည်။
.သန်းဇော်နှင့် သိန်းမောင် ဆောင့်ချက်များ စည်းချက်ညီလှသည်။သက်နွယ်ကတော့ သန့်ဇင်ရင်ဘက်ပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ ယောက်ျား နှစ်ယောက်လိုးကောင်းအောင် ခါးကို ကော့ပေးထါးသည်။
သက်နွယ်ကတော့ ငယ်သံပင်ထွက်လုအောင် ညည်းနေရပြီး သန်းဇော်နှင့်သိန်းမောင်တို့ ကလဲ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်လိုးနေကြသည်။
“အား……… ကောင်းတယ်……… ဆောင့်ပေး…… အား………. နင်တို့လီးကြီးတွေကို…….. ငါအရမ်းကြိုက်တယ်……. အား………..”
“အင်း……. ကြိုက်ရင်လိုးပေးမှာပေါ့ကွ…. အင့် အင့်”
သန့်ဇင်မျက်လုံးများပင်ပြူးကျယ်သွားသည်အထိ သက်နွယ်စီမှထွက်လာသော အသံမှာ သက်နွယ်အသံမှ ဟုတ်ပါသလားဟုပင် ယုံမှတ်မှားလောက်အောင်ပင် ဖြစ်သွားသည်။
“အား……………… အား……………… အား……………. ဆောင့် ဆောင့်………. မြန်မြန်ဆောင့်………… ငါပြီးတော့မယ်………အား…………”
သက်နွယ်မှာ အလယ်ကနေပြီး တွန့်တွန့်လူးကာနေသည်။ ယောကျားကြီး နှစ်ယောက်မှာလည်း. အားကုန်သုံးကာဆောင့်လိုးရင်း သုံးသောက်သားဘရှေ့ဆင့်နောဆင့် ပြီးကာသွားကြတော့သည်။
အပြင်မှသန့်ဇင်လည်း ထိုသုံးသောက်ရမက်သံများကို ကြားရမြင်ရပြီး ကာမစိတ်အထွဋ်အထိပ်ရောက်သွားပြီး ပြီးကာသွားသည်။ ထိုနေ့က သန့်ဇင်တစ်ျယာက် ဘောင်းဘီကို မြန်မြန်ပြန်ဝတ်ပြီး ထိုသုံးယောက် အမောဖြေနေချိန်မှာ အပြင်ကို ပြန်ထွက့လာခဲ့ပြီး တည်းခိုခန်းတွင် သွားနားလိုက်တော့သည်။ သန့်ဇင်စိတ်ထဲတွင် သက်နွယ်ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ဝမ်းသာသလို ဝမ်းနည်းသလို ခံးစားနေရသော်လည်း ထိုအကြောင်းကို ပြန်တွေးမိတိုင်း လီးကတဆက်ဆက်တောင်လာတော့သည်။